प्याज काट्दा आँशु आउँछ ? आँशु नआउन यसाे गर्नूस्… – hamrosandesh.com
प्याज काट्दा आँशु आउँछ ? आँशु नआउन यसाे गर्नूस्…
प्याज काट्दा आँशु आउँने कुरा त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । सायद प्याज काट्दा नरुने, अथवा आँशु नझार्ने व्यक्ति कमै होलान् । प्याज काट्न सुरु गर्ने बित्तिकै सबैलाई रुन मन लाग्छ । त्यसमा पनि हातले आँशु पुछ्ने क्रममा त झन बढि पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
प्याज काट्दा किन आँशु आउँछ रु तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ ? प्याजमा एमिनो एसिड र सल्फेनिक एसिड पाइन्छ । जसका कारण प्याज काट्ने यी दुई एसिड मिक्स भई सल्फर ग्यास बन्छ । र यो ग्यास आँखामा पुग्छ । त्यही सल्फर एसिडका कारण प्याज काट्दा आँखामा आँशु आउँछ ।
प्याज काट्दा आँशु नआउन यसाे गर्नूस्
-प्याजलाई काट्नु भन्दा पहिले त्यसको जरालाई काटेर फाल्ने ।
-प्याजलाई काट्नु भन्दा केहि समय अगाडिनै प्याजलाई फि्रजमा राख्ने ।
-प्याज काट्ने ठाउँको छेउछाउमा पङखा नचलाउँने ।
-प्याज काट्ने समयमा चस्मा लगाउँने ।
-काट्नु भन्दा पहिले प्याजलाई पानीमा भिजाउँने ।
-प्याज काट्ने छेउछाउमा मैनबत्ती बाल्ने ।